Moments leh saaxiibo 25
Maxay yihiin dhagaxyo qaali ah oo loo qoondeeyay bilaha qaarkood sanadka? Tani ma waxay keentay wax kale oo aan ahayn dadka oo dhan?
Dhagax la mid ah ayaa lagu sheegaa dadka kala duwan inay ka tirsanyihiin bilooyin kala duwan, iyo waxyaabo qaas ah ayaa la sheegay in ay ka yimaadaan dhagaxyo qaarkood markay xiranyihiin bilaha ama inta lagu jiro xilliga ay dadku yiraahdaan waa in lagu xidho. Dhammaan fikradaha kala duwan ma noqon karaan run, badankooduna waxay u badan tahay inay u jimicsadaan. Laakiin fanku waa shaqo aan caadi ahayn oo maskaxda ku jirta ama maskax ahaanba ka muuqata maskaxda; Halka, malayntu waa sawir samaynta ama dhisidda fakarka maskaxda. Si la mid ah waxa sabab u ah soo noqnoqoshada sheyga waa shey laftiisa, sidaa daraadeed waxaa laga yaabaa in jacaylka badan ee ku saabsan sumcooyinka dhagaxyada ay sabab u yihiin waxyaalaha wanaagsan ee dhagaxyada laftooda iyo aqoonta mar horeba ku saabsan qaddarinta dhagaxyada , laakiin ka mid ah aqoonta laga lumay ayaa weli ah xuduudaha oo kaliya, ama aan caadi ahayn oo ka shaqeeya maskaxda, maadaama ay ka muuqato aqoonta hore ee lagu ilaaliyo dhaqanka ragga. Dhammaan walxaha waa xarumo kuwaas oo xooga dabeecadda ah. Qalabka qaar ayaa bixiya xarumo awood leh oo awood leh si ay u dhaqmaan marka loo eego walxaha kale. Tani waxay sabab u tahay qaabaynta qaybaha kala duwan ee qeybaha kala duwan. Copper oo la diyaariyey oo lagu sameeyey xadhig ayaa bixin doona xarig taas oo koronto laga yaabo in la qabto meel dhibic ah. Korontadu kuma socon doonto weedho qallafsan, inkastoo ay ku socoto wadiiqo naxaas ah. Si isku mid ah sida bakirku waa dhexdhexaad ama koronto koronto, sidaa daraadeed dhagaxyada ayaa noqon kara xarumo ay adeegsanayaan xoogagga qaarkood, iyo sida naxaasku ka wanaagsan yahay koronto ka badan tan kale ee birta ah, sida zinc ama lead, sidaa daraadeed dhagaxyada qaarkooda ayaa ka fiicnaanaya xarumahooda xooggooda ah marka loo eego dhagaxyada kale. Nadiifiyaha dhagaxa si ka fiican waa sida xarun xoog ah.
Bil kasta wuxuu keenaa saameyn gaar ah oo ku saabsan dhulka iyo wax kasta oo dhulka ku yaal, iyo, haddii dhagaxaadu ay qiime u yeeshaan xarumo xoog ah, waxay macquul noqon kartaa in la aamino in dhagaxyada qaar ay awood u yeelanayaan xarumahaas oo kale, inta lagu jiro xilliga saameynta bisha ay ahayd mid awood leh. Maaha mid macquul ah in laga yaabo in ay jirto aqoon ay leedahay xilliyada ay dhagaxyada lahaan jireen wanaaggooda iyo tan sababtoo ah kuwan hore oo ka mid ah kuwii hore oo ogaa dhagaxyada loo dhiibay bilahooda. Si loo sooco qiimo gaar ah dhagaxyada waa wax aan faa'iido u lahayn tan ama qofka laga yaabo in uu macluumaadkiisa ka soo qaato buugga almanac ama faaiido-sheegasho ama qof leh macluumaad yar sida naftiisa. Haddii qofku dareemo inuu jecel yahay dhagax naftiisa, marka laga reebo qiimaha ganacsiga, dhagaxa ayaa laga yaabaa inuu leeyahay xoogaa ka mid ah ama isaga. Laakiin waa wax aan faa'iido lahayn oo laga yaabo in ay waxyeello u geysato waxyaabo xiisa leh oo dhagax ama dhagax ah oo dhagaxyada ka mid ah bilaha qaarkood, sababtoo ah taasi waxay u abuurtaa dabeecad aan caadi ahayn oo ka caawisa waxa uu u qaban karo naftiisa . Si aad u jeceshahay oo aanad u haysan sabab wanaagsan oo aaminaad ah waa qof dhaawac u geysta intii aad waxtar laheyd, sababtoo ah waxay maskaxda ku mashquusho, waxay ku dhejisaa waxyaabo xasaasi ah, waxay keenaysaa in ay ka baqayso in ay ka ilaaliso ilaalinta, oo waxay ku xiran tahay waxyaabo aan caadi ahayn halkii ay ka ahaan lahayd lafteeda dhammaan xaaladaha degdegga ah.
Miyuu dheeman yahay ama dhagax qaali ah oo qaali ah oo aan ahayn kan kaas oo metelaya lacagta caadiga ah? iyo, haddii ay sidaas tahay, muxuu yahay qiimaha dahab ama dhagax noocaan oo kale ah?
Dhag walba wuxuu leeyahay qiimo ka duwan qiimaha ganacsiga, laakiin si la mid ah oo aan qof kastaa garanaynin qiimaha ganacsiga maaha qof kasta ogyahay qiimaha dhagax aan ahayn qiimaha lacagta. Qofka oo jaahil ka ah qiimaha alwaax aan qarsooneyn wuxuu u gudbin karaa sida uu u ahaan lahaa dhagax caadi ah. Hase yeeshee, khabiirku wuxuu qiimeeyaa qiimaha, wuxuu u gooyaa habka sida loo muujiyo quruxdiisa, ka dibna sii wado habboon.
Qiimaha dhagax isku mid ah wuxuu ku xiran yahay inuu yahay xarun wanaagsan ee soo jiidashada qaybaha ama xoogga iyo qaybinta kuwan. Dhagaxyo kala duwan ayaa soo jiidanaya xoogag kala duwan. Dhamaan ciidamada oo dhan waxtar uma leh dadkaas. Qaar ka mid ah xoogagga waxay caawiyaan qaar qaarna dhaawici karaan kuwa kale. Dhagax soo jiidaya xoog gaar ah ayaa laga yaabaa inuu mid ka caawiyo midna dhaawici karo. Mid waa inuu ogaadaa waxa naftiisa u wanaagsan, iyo sidoo kale inuu ogaado qiimaha dhagax ka mid ah kuwa kale oo ka duwan kuwa kale ka hor inta uusan go'aan ka gaarin caqli ahaan dhagax taas oo u wanaagsan isaga. Maaha macquul in la aamino in dhagaxyada ay leeyihiin qiimo gaar ah oo ka baxsan qiimaha lacagtoodu ay ka badan tahay inay u maleeyaan in dhagaxda loo yaqaan "lode stone" ay qiimo kale ka badan tahay waxa ay ku habboon tahay lacagta Dhagaxyada qaar waa kuwo xun, qaarkoodna waxay leeyihiin awood ama walxaha si firfircoon uga dhex shaqeeya. Sidaa daraadeed, magnet wuxuu leeyahay xooga magnetism oo si firfircoon u dhaqma, laakiin birta jilicsan waa wax xun mana jiri karto awood sidaas oo kale ah. Dhagaxyada oo ah xarumaha firfircoon si wanaagsan looma beddeli karo qiimaha; laakiin dhagaxyada aan fiicnayn waxaa lagu soo oogi karaa shakhsiyaadka waxaana ay xarumo u sameeynayaan xooggooda si ay u dhaqmaan, si la mid ah in birta jilicsan lagu dhex mari karo magnet iyo ka dibna ay noqoto magnet. Dhagaxyada, sida magnets, waa xarumo taas oo mid ama ka badan ficilka xoogga leh waa kuwa sida loogu diyaar garoobo dabeecadda ama lagu soo oogay xoog ama ku xiran xoogagga shakhsiyaadka. Kuwa dhagxaanta leh ee xarumaha awoodda leh waxay soo jiidan karaan ciidamadooda gaarka ah, sida biriijka iftiinka ayaa soo jiidanaya iftiinka. Iyadoo aan aqoonin dhagaxyadaas iyo qiimaha ay u leeyihiin, isku dayga lagu isticmaalo dhagaxyada ujeedadan waxay kaliya u horseedi doonaan jahwareerka fikirka iyo jaahilnimada. Waxaa jira sababo yar oo ku lug leh dhagaxyo ama wax kasta oo kale ujeedooyin fudud, haddii qofku ogaado shuruucda xukuma waxa loo isticmaalo iyo nooca shakhsiga ama xoogga la xidhiidha taas oo loo adeegsanayo ama loo adeegsanayo. Habka ugu fiican ee wax kasta oo aan la garaneynin waa in la ilaaliyo indhaha iyo maskaxda furan oo diyaar u ah inuu aqbalo wax kasta oo macquul ah oo ku saabsan waxaas, laakiin diidaya in uu wax kale helo.